Sidee laba dowladood oo carbeed uga shaqeeyeen afgambiga dal... - Axadle Wararka Maanta
Tunis (Axadle) – Ra’isul Wasaaraha xilka ka dagaya ee dalka Tunisia Hichem Mechichi ayaa lagu weeraray xarunta madaxtooyada habeenimadii Axadda kahor inta uusan aqbalin inuu iska casilo xilkiisa sida ay ilo wareedyo ku dhow u sheegeyn Middle East Eye.
“Dhaawac ayaa kasoo gaaray wajiga, waana sababta uusan uga soo muuqan dadka hortooda ” ayuu yiri mid ka mid ah ilo wareedyada.
Sida laga soo xigtay ilaha, Mechichi oo ahaa shakhsiga uu madaxweyne Saied u doortay xilka Ra’isulwasaaraha ayaa mar kale Axaddii laga codsaday inuu xilka ka dago.
Wuxuu ilaa waqtigaas si isdaba joog ah u diiday inuu iscasilo kadib khilaaf ka dhashay magacaabista afar wasiir oo ka tirsan xukuumadiisa.
Ilo wareedyo ayaa sheegay in markii Mechichi uu diiday inuu xilka iska casilo la garaacay. Middle East Eye waxay sii fahamsan tahay inay “dad aan reer Tunisia ahayn” ku sugnaayeen qasriga waqtigaas.
“Madaxweynaha Masar Abdel Fattah el- Sisi wuxuu usoo bandhigay madaxweynaha dalka Tunisia Saied inuu siiyo dhammaan taageeradii uu ugu baahnaa afgambiga, Saiedna wuu qaatay,” ayuu yiri mid ka mid ah ilahaasi.
“Milatariga iyo saraakiisha ammaanka ee Masar waxaa loo diray dalka Tunisia iyagoo taageero buuxda ka helaya amiirka dhaxalka leh ee Abu Dhabi Mohammed bin Zayed” ayuu yiri mid kamid ah illo wareedyada.
Ra’isul Wasaaraha xilka ka degay ayaa soo saaray bayaan Isniintii kaas oo uu ku sheegay in uusan “sinnaba u noqon karin caqabad ama qof qayb ka qaata inay sii kororto xiisadda siyaasadeed ee ka jirta Tunisia”.
“Waxaan ku wareejinayaa masuuliyadda qofka uu u wakiisho Madaxweynaha Jamhuuriyadda inuu hogaamiyo Xukuumadda, anigoo guul u rajeynaya dhammaan xubnaha cusub ee Dowladda imaaneysa,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Ra’isulwasaaraha xilka ka degay